Home News Al-Shabaab oo meel fagaara ah ku toogtay Sedax Wiil oo dhalinyaro ahaa
Al-Shabaab oo meel fagaara ah ku toogtay Sedax Wiil oo dhalinyaro ahaa
Ururka Al Shabaab ayaa fagaaro ku yaallo deegaanka Buq Aqable ee Gobolka Hiiraan, waxa ay ku toogteen Saddex ruux oo jaajuusnimo ay ku eedeeyeen.
Dadkaan Shabaab ay toogteen laba ka mid ah Jaajuusiin ayeey ku eedeeyeen, halka ruuxa saddexaad ay ku sheegeen inuu ahaay Askari.
Fagaaraha deegaanka Buq Aqable ayeey ka dhacday falkan toogashada ah, waxaana la isugu yeeray dadka deegaanka oo daawanaayay qaabka toogashada u dhaceysay.
Ragga Shabaab ay dileen ayaa waxaa lagu kala magacaabaa.
1-Cabdi Qaadir Xasan Aadam oo 25-jir ah waxa ay Shabaab ku eedeeyeen inuu Jaajuus u ahaay dowladda Federalka Somaliya.
2-Cabdi Caziiz Axmed Maxamuud oo 28-jir ah waxa ay Shabaah ku eedeeyeen inuu jaajuus ahaay.
3-Faarax Cali Jibriil oo 29-jir ah waxa ay Shabaah ku sheegeen inuu ahaay askari ka tirsan Ciidanka dowladda ee ku sugan degmada Maxaas ee Wilaayada Hiiraan.
Al Shabaab ayaa badanaa xukuno hal dhinac oo billaa qareen ah waxa ay ku ridaan dadka ay soo eedeeyaan.